एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी – Mission
एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ ३२, २०७३
कोहलपुर, जेठ ३२
कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयले उठाउँदै आएको घरजग्गा कर व्यवहारिक नभएको भन्दै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने प्रक्रिया बढाइएको छ । आगामी आ.व. २०७३÷०७४ बाट शुरु गर्ने गरी एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउने तयारी गरिएको हो ।
के हो एकीकृत सम्पत्ति कर ?
एकीकृत सम्पत्ति भन्नाले नगर क्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भवन, सेड, ग्यारेज जस्ता भौतिक संरचना सम्झनुपर्छ । यो करको दायरामा नगर क्षेत्रभित्र आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा वा संरचना भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु आउँदछन् । यो कर लागेपछि मालपोत लाग्दैन र यो कर तिरेको निस्सा नै जग्गामा लाग्ने पोत तिरेको प्रमाण समेत हो ।
नगरपालिकाले घरजग्गा कर उठाउँदै आएकोमा यसरी विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउनुभन्दा एकमुष्ठ रूपले कर उठाउनु व्यवहारिक हुनेभएपछि कार्यालयले एकीकृत कर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एकीकृत सम्पत्ति करको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राजश्व परिचालनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ ।
सम्पत्ति कर लागू भएपछि मालपोत भूमिकर (तिरो) र घरजग्गा कर विस्थापित हुनेछन् । हाल नगरवासीले तिरो र घरजग्गा कर दुवै तिर्दै आएको अवस्था छ । जग्गाको मूल्यांकन मालपोत कार्यालयले तोके बमोजिम हुँदा घरजग्गा कर धेरै तिर्नुपरेको थियो ।
एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि १ लाख देखि १० लाख सम्पत्तिसम्म रु. २५ देखि दुई सय कर, १० लाख १ देखि २० लाखसम्म रु. दुई सय ५० देखि चार सय, २० लाख १ देखि ३० लाखसम्म रु. पाँच सय देखि एक हजार, त्यसपछि ३० लाख १ देखि ५० लाखसम्म रु. १२ सयदेखि तीन हजार, त्यसपछि ५० लाख १ देखि एक करोडसम्म रु. ३५ सयदेखि १० हजार, त्यसपछि एक करोड १ देखि दुई करोडसम्म रु. १२ हजारदेखि २० हजार, त्यसपछि २ करोड १ देखि पाँच करोडसम्म २५ हजार देखि ६० हजार र पाँच करोडदेखि माथि दुई रुपैयाँ प्रतिहजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत सम्पत्ति करका विषयमा सोमबार कोहलपुरमा अभिमूखिकरण गरियो । जहाँ विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीले वैज्ञानिक हिसाबले कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । अभिमुखिकरणमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका विभागका शाखा अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोहलपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद शर्माको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन नगरपालिकाका लेखा अधिकृत शरदकुमार बरालले गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ ३२, २०७३ 11:32:41 AM |
Prevचीनले नटेरेपछि पुटिनलाई फोनमा गुनासो गरे मोदीले
Nextबाँकेका लागि कृषिमा बजेट कम